Sciences soLuntu Yendalo
Uninzi lweefomfle zomhlaba zixinyiwe kakhulu ukuze zisebenze kakuhle
Izixhobo ze-organic "biodegrade" xa ziphulwe phantsi kwezinye izinto eziphilayo (njengefungi, iibhaktheriya, okanye ezinye iimbonakalo) kwiindawo zazo ezizimeleyo, kwaye kwakhona ziphinde zenziwe ngokutsha njengezakhiwo zokwakha ubomi obutsha. Inkqubo inokuthi ivele ngokwenzekayo (ngosizo lwe-oxygen) okanye i- aerobically (ngaphandle kwe-oxygen). Izimo ziphuka kakhulu ngokukhawuleza phantsi kweemeko ze-aerobic, njengoko i-oksijini inceda ukuphula ii-molecule, inkqubo ebizwa nge-oxidation.
Iifomflethi zihlala ziPakishwe kakhulu kwiTrash kwi-Biodegrade
Iintlawulo ezininzi zomhlaba zi-anaerobic ngokuqinileyo kuba zihlanganiswe ngokuqinileyo, kwaye ke ungavumi ukungena umoya. Ngaloo ndlela, nayiphina i-biodegradation eyenzekayo ihamba ngokukhawuleza.
"Ngokuqhelekileyo kwiifayili zepropathi, akukho ncola enkulu, i-oxygen encinci, kwaye imbalwa xa ikhona iindidi ezincinci," kusho ummeli onobumba obuhlaza kunye nombhali uDebra Lynn Dadd. Ukhankanya uphando olwenziwa ngumhlaba olwenziwa ngabaphandi beYunivesithi e-University of Arizona abakhange bafumene izinja ezishushu ezineminyaka engama-25 ubudala, iinkozo kunye neidiya ezithwalwayo, kunye namaphephancwadi aneminyaka engama-50 ubudala afundwayo.
Ukucwangciswa Kwangathi iVimbela i-biodegradation
Izinto zokuhlaziywa kwezinto ezinokusetyenziswa kwempahla nazo zingenakudiliza kwiifom zomhlaba xa ukuqhutyelwa kwezoshishino behamba ngaphambi kokuba iintsuku zabo zisebenzise zibe ziifomu ezingenakwazi ukuzibona ngeemveliso kunye ne-enzyme eziququzelela ukulungiswa kwemvelo. Umzekelo oqhelekileyo yi-petroleum, leyo i-biodegrades ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza kwimo yayo yangaphambili: ioli engcolileyo.
Kodwa xa i-petroleum isetyenziswe kwiplastiki, ayiyikho imveliso ye-biodegradable, kwaye ngoko unako ukuvala iifomflethi ngonaphakade.
Abanye abavelisi benza izibhengezo ukuba iimveliso zabo zithotshiswe ngezithombe , oko kuthetha ukuba baya kuhlaziywa xa beboniswa elangeni. Umzekelo oqhelekileyo yiplastiki "i-polybag" apho amanqaku amaninzi afikeleleke ekhuselweyo ngeposi.
Kodwa amathuba okuba izinto ezinjalo ziza kubonakala zikhanyiswe ilanga ngelixa zingcwatyelwe ezininzi iinyawo ezinzulu kumhlaba ongekho mhlaba. Yaye ukuba benza i-photodegrade kukho konke, kungenzeka ukuba zibe ziincinci zeeplastiki, ezifaka ingxaki kwi-microplastics ingxaki , kunye nokongeza kwiplastiki enkulu elwandle .
I-Designfill Design kunye neThekhnoloji inokuthi kuphuculwe i-Biodegradation
Ezinye iifomfayile zomhlaba ngoku zenzelwe ukukhuthaza i-biodrogradation ngokusebenzisa injection yamanzi, i-oxygen, kunye ne-microbes. Kodwa ezi ntlobo zendawo zibiza kakhulu ukuba zidale kwaye, ngenxa yoko, azibambanga. Olunye uphuhliso lwakutshanje lubandakanya iifomflethi ezinamacandelo ahlukeneyo ezixhobo ezinokuhlaziywa, ezifana nokutya okutya kunye nenkunkuma yendawo. Abanye abahlalutyi bakholelwa ukuba ubuninzi be-65 ekhulwini lwenkunkuma ekhoyo ngoku thunyelwa kwiindawo zokuthengisa umhlaba eMntla Melika ziqulethe "i-biomass" enjalo i-biodegrades ngokukhawuleza kwaye ingavelisa umrhumo omtsha wokufumana imali: umhlaba othengiswayo.
Ukunciphisa, Ukuphinda Usebenzise kwakhona, Ukubuyiswa kwakhona kwakhona yiSisombululo esihle kunazo zonke kwii-Landfills
Kodwa ukufumana abantu ukuba bahlele udoti wabo ngokufanelekileyo ngowomnye umba. Enyanisweni, ukuthobela ukubaluleka kokunyuswa kwemvelo "Rs Rs" (Nciphise, Phinda Usebenzise kwakhona, Phinda uhlaziywe!) Yindlela efanelekileyo yokuxazulula iingxaki ezibangelwa yimilingo yethu ekhula.
Ngeentlawulo zempahla emhlabeni jikelele, ukulungiswa kwezobuchwepheshe akunakwenzeka ukuba iingxaki zethu zokulahla inkunkuma zihambe.
Ehlelwe nguFrederic Beaudry
Indlela yokuMisa iintlobo eziHlangayo
Kutheni Iminyango NeeDolph Beach Zizihlamba?
Ngaba Iingenelo Zokusetyenziswa Kwezinto Zisetyenziselwe Ukugqithisa Iindleko?
Ukuthengiswa kwamanzi eMhlabeni wonke ukutyhala njengoko abantu bekhula
Ngaba Unokuphinda Uhlaziye Ibrush yakho yamazinyo?
I-Methane: iGesi eneGesi yokuGesi
Amagama aqhelekileyo adibanayo: Angaziwa kwaye ahlangani
10 Iindaba malunga neTroodon
I-Skier ne-Climber uFredrik Ericsson kwi-K2
IinguNgu ezimbini zeFrench - iNégation kabini
Igama likaLeonard laliyini?
I-Comet Tempel-Tuttle: Umzali we-Meteor Shower
Ncitshitshisa Ukutshintshwa Kwemihla
Ithemba leBhayibhile iivesi
Ukugcina iso lakho kwiBhola kwiTable Tennis / Ping-Pong
IMicrosoft Rocks - Hlaziya
Ngumthendeleko kaKristu uKumkani?
Yeka Ukwenza Ezi zinto Ukuba Ungobuhedeni